HomeArimaha QoyskaQaladaad Ka Dhaca Ragga Inta Lagu Jiro Haasawaha/Shukaansi Ee Ninyahoow Iska Ilaali
In badan oo Ragga Somalida ka mid ahi inta ay is leeyihin haweeneyda soo jiita ayaa waxa ay ku dhaqaaqayaan talaabooyin la yaab ah taasi oo haweeneyda ku khasbaysa in ay kumanaan Mayl ka fogaato ninka.
Xidhiidhka iyo dareen qaybsiga ragga iyo dumarku waa arrin dabiici ah balse u baahan fan iyo barasho abuuri kara xidhiidh toolmoon oo la mahadiyey oo ninka iyo gabadha dhex mari kara.
In badan oo haweenka ahi waxa ay ku fashilmaan in ay soo jiitaan ragga gayaankooda ah ama ay u dhaxeen ee wakhtigaasi ay nolosha la wadaagayaan halka in badan oo ragga ka mid ahi iyana ku fashilmaan in ay hannaan habboon ku soo jiidan karaan haweenayda.
Hadaba Caashaqa.com waxa ay qormadan kooban ku eegeysaa dhawr arrimood oo ay ragga qaarkood ku kacaan kuwaasi oo waxyeelo weyn u keeni xidhiidhka dhex mari lahaa haweenayda, haweenkuna aad uga fogaadaan. Waxa ayna kala yihiin
1-Xidhiidhka Badan: In aad Xdhiidh Badan gaar ahaan xagga xidhiidhka Isgaadhsiinta aad ku sameyso haweeneyda aad jeceshahay waxaad ku waayeysaa ixtiraamkii ay kuu haysay, waxa ayna ku qasbeysaa xitaa in ay waydo in ay kuu soo hiloowdo. Khubarada arrimaha lammaanuhu waxa ay sheegaan in haweenku neceb yihiin ragga mar walba xidhiidh toos ah ku wareeriya haweenayda. 24-ka saacadood haddii aad taleefan ku waasho haweenayda aad damacsan tahay waxa aad ogaataa in ay kaa fogaan doonto.
2- Ninka Ku Hor Ooya Haweeneyda: Waxaa hubaal ah in haweeneydu jeceshahay ninka dareenka naxariista badan leh balse ka digtonaaw ninyahow in aad ahaato nin jil jileecu ka batay si aanay haweeneydu u seegin fahamkii ninka ay ka qabtay, ogaaw haweenku waxa ay si weyn uga helaan ninka xoogan oo u dulqaadan kara culeysyada ka yimaad xidhiidhkooda ee is kaantaroola.
3-Ninka Dadka Hortooda Ku Buun Buuniya Dareenkiisa Hoose: Haweeneydu waxa ay jeceshahay in ay meel walba ku muujiso jaceylka aad u qabto balse waa hab ixtiraam uu ku jiro, ogow kama hesho mid ka bad badis ah taasi oo dadka kale ka xishoodsiineysa.
4- In loola dhaqmo sida Ilmaha: Ma jecla haweeneydu ninka sida ilmaha ula dhaqma, Ku dadaal ninyahaw in aad ka waantowdo in aad dabeecad noocaasi ah haweenayda kula dhaqanto. Waa in aad ku dadaashaa in aad dhaqankeeda wanaajiso oo aad ula dhaqantaa sidii qof kula mid ah.
5-Ninka wax walba haweeneyda doorransiiya (Doodha oo dhan iyada siiya): Waxa muhiim ah in xaaskaaga aad waxyaabaha qaar uga tagato in iyadu doorato waxaana muhiim ah in ay dareento in aad garab taagan tahay ra’yigaagana siiso balse ma fiicna in wax walba aad tidhaahdo samee oo adigu dooro wixii kula habboon.
Arimahaan Waxaad Ninkaada Ugu Muujin Kartaa Jaceylka Aad U qabto.
Muuqaal : Waxaan Ogaaday In Aan Leeahay Qalbi Nadiif Ah